Kismaayo News » Puntland iyo Koonfur Galbeed oo barbar-dhac noqday
Kn: Ciyaar xiiso leh oo Puntland iyo Koonfur Galbeed ku dhexmartay garoonka Koonis ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo idlaatay barbar-dhac kadib markii hal gool iyo hal gool la isku mari waayay.
Koonfur Galbeed ayaa qaybta B ka gashay kaalinta koobaad kadib markii ay bareejo la gashay Puntland halka ay horay u garaacday Hirshabeele, sidaasna ay ku heshay 4 dhibcood. Koonfur Galbeed waxay ku aadi doontaa kaalinta 2aad qoladii ka gashay qayb A, taasi oo la filaayo inay isku hardiyaan Jubbaland iyo Galmudug oo ciyaartoodu shalay baaqatay.
Puntland oo ayaduna kaalinta 2aad ka gashay qaybta B, kadib markay 2 dhibcood oo min daroo ay ku keensatay ayaa la ciyaari doonta kooxda gobolka Banaadir oo kaalinta 1aad ka gashay qaybta A kadib markii ay 6 dhibcood ku soo gudubtay wareegga 2aad.
Ciyaaraha ayaa soo celiyay rajadii dhalinyarada iyo is-dhex-galkii bulshada, ayadoo halkii markii hore dhalinyaradu ay fadhi kudirirka kaga doodi jireen qabyaaladda, hadeer u badalay koox heblaayo ayaa badisay iyo koox heblaayo ayaa badin doonta.